सबै तिर दलाली हटाउने उद्घोष गरेको सरकारले बीमामा हुने दलाली कहिले हटाउछ ? - हाम्रो देश
धेरै प्रश्नहरु मनभित्र खेलिरहेका छन आज यस स्तम्भकारलाई । साँच्चै लाग्दैछ यो देशको चिन्ता मलाई मात्र होला । जीवन बीमाले हामी मानिसको भैपरि आउने दुर्घटनालाई कभर गरेको हुन्छ भने निर्जीवन बीमाले भौतीक क्षतिको कभर गरेको हुन्छ ।
जस्तै गएको २०७२ सालमा भुकम्पमा परि मानिसहरुको मात्र मृत्यु भएन त्यसमा धेरै धनको पनि नोक्सानी भयो । त्यसमा भएको भौतीक क्षतिको आवेदन परिरहदाँ मानविय क्षतिको चर्चा त्यति धेरै भएन ।
नियमक निकायले सोझा जनतालाई जबरजस्ती बीमा गराई १ किस्ताको कमिसनको लोभ गर्ने एजेन्टहरुलाई रोकी प्रचारप्रसार अझै भनौ त्यहि एजेन्ट खारेज गरी एजेन्टलाई दिने कमिसनले बीमाको महत्वबारे जानकारी गराउन किन सकेको छैन ।
स्तम्भकारलाई जिज्ञासा बढेको छ । बीमा महत्व बुझाउन एजेन्ट ‘दलाली’ पाल्ने कि सचेतना बढाउने नियमक निकायले ? के यसमा चाहि नियमक निकायले दलाली हटाउन सक्दैन ?
यो स्तम्भकारको जिज्ञासा मात्र हो, कोहि सग यसको उत्तर छ भने सुझाब सहित ग्रहण गर्नेछु ।